ဓမ္မဂင်္ဂါ: ဘုရင်ဘုန်းကြီး ဘုန်းကြီးဘုရင်
တရုတ်နိုင်ငံက စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဧကရာဇ်ဘုရင်တစ်ပါးအကြောင်းပါ.. မနက်အိပ်ရာထ ဖတ်မိတာနဲ့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်....။ ဘာသာပြန်ဖို့မအားတာနဲ့ မူရင်းလေးအတိုင်း.....
(တိဘက်တက္ကသိုလ်မှာ ယနေ့ကျင်းပမယ့် ညီလာခံအကြောင်း ရေးသားဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်...)း)
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 3:46 PM
ဘုန်းဘုန်း တော်တော်များများဖတ်ဖြစ်သွားပါတယ် ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ. ဖတ်ဖြစ်သွားတာပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးများပါတယ်ဘုရား။ ဒါ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘုန်းဘုန်းတော်တော်များများဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ. ဖတ်ဖြစ်သွားတာပါ။ ကျေးဇူးများလှပါတယ်ဘုရား။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘုရား b